Zvese zviito zvaunogona kushandisa neTrackpad pane iyo iPad | IPhone nhau
Iko kuenderana kweiyo iPad nechero bluetooth mbeva uye trackpad kwave nekureva shanduko huru munzira yatinoshamwaridzana nayo neiyi iPad. Chiitiko chitsva chakapedzwa neMagineti Khibhodi yePad Pro. Tinokuratidza zvese zviito zvaunogona kuita ne trackpad yakabatana neako iPad.
1 Kukwanirana zvinodiwa
2 Zvese zviito
2.1 Yese trackpads
3 Mashiripiti Trackpad 2 uye Mashiripiti Khibhodi
Pese patinotaura nezve iPad uye trackpad, iyo pikicha yeiyo Pro Pro uye yeMicrosoft Keyboard inoonekwa, uye muenzaniso wakanakisa vhidhiyo inofambidzana nechinyorwa ichi, asi chokwadi ndechekuti chero iPad ine iOS 13.4 kana yakakwira uye chero Bluetooth trackpad, pamwe nechero keyboard ine Trackpad, senge iyo kubva kuLogitech kana Brydge, titendere isu kuzvibata isu kuburikidza nemasaini. Chii chinosiyana huwandu hwezviyero zviripo, saka iyo Magic Trackpad 2 kana iyo nyowani yeMicrosoft Keyboard yePad Pro inobvumira zvese zviito zvatinokuratidza muvhidhiyo iyi, nepo Magic Trackpad 1 ichingobvumidza mashoma. Kana iwe uine imwe keyboard ine trackpad kubva kune imwe mhando, iwe uchafanirwa kuongorora iwo maratidziro kuti uone kuti ndeapi magemenzi anotsigirwa.
Gadzira watinya nemumwe munwe: bata iyo trackpad nemunwe mumwe. PaApple trackpads uye paMicrosoft Keyboard ichi chiito chinogona kuitwa chero kupi pane iyo trackpad. Mune mamwe matrackpads anogona kunge akaganhurirwa kunzvimbo yepakati yakafanana.
Batisisa pasi: Kumanikidza nekubata kunoratidza mamwe mamenyu, sekunge tiri kushandisa Haptic Kubata.
Dhonza: kubata pasi chinhu uye kufambisa chigunwe chako pane iyo trackpad kunotibvumira kufambisa icho chinhu.
Ratidza Dock: isu tichafanirwa kudzikisa iyo inotora kuti ive pasi pemucheto wezasi wechidzitiro
Dzokera kune yekutanga skrini: kutanga tichafanirwa kuita chiratidzo chekuratidzira iyo Dock, uye mushure mekunge yaonekwa isu tinofanirwa kudzikisa pointer kuzasi kwemucheto wezasi. Kana iwe uine iyo iPad ine Chiso ID unogona kungobaya pazasi bar.
Ratidza Slide Pamusoro: isu tinofanirwa kuisa pointer kurudyi kumucheto kwechidzitiro uye wozoitsvedza ichipfuura pamucheto wedivi. Kuiviga isu tinofanirwa kuita chiratidzo chimwe chete.
Vhura Control Center: Tinofanira kuisa pointer pamusoro pemifananidzo yemamiriro ekumusoro kurudyi kwechidzitiro, wobva wadzvanya kana kutsvedza.
Vhura Notification Center: Nemumwe munwe, fambisa iyo inotora kupfuura kumucheto wepamusoro wepakati penzvimbo yechidzitiro. Kana tinya pamamiriro emifananidzo kumusoro kuruboshwe.
Mashiripiti Trackpad 2 uye Mashiripiti Khibhodi
Pamusoro pezviito zvese zvataurwa, chizvarwa chechipiri Magic Trackpad uye nyowani yeMicrosoft Keyboard ine nhamba yakanaka yekuwedzera kwekuwedzera. Mamwe makadhibhokisi kubva kune mamwe mabhureki anogona zvakare kushandisa aya masaini asi zvinoenderana nekuenderana kwawo.
Vertical uye yakatwasuka scroll: isu tinofanirwa kushandisa zvigunwe zviviri uye kusimuka kumusoro / pasi kupururudzira zvichidzika, kana kurudyi / kuruboshwe kupururudzira yakatwasuka.
Zoom: Neminwe miviri pane trackpad isu tichaita chiratidzo chekuvaparadzanisa kuti voswededze, kana kuvaswededza kuti vaderedze zoom.
Dzokera kune yekutanga skrini: pamusoro pechiratidzo chatakaratidza kare, nemhando dze trackpad idzi tinogona kutsvedza neminwe mitatu kuti tidzokere kuchiratidziro chemumba, kana chiratidzo chekujoinha minwe mina.
Vhura app selector: kana isu tichida kuvhura iyo multitasking skrini ine ese maapplication akavhurwa isu tinofanirwa kuita chiratidzo chekutsvedza kumusoro neminwe mitatu asi kumbomira usati wasimudza minwe. Tinogona zvakare kuisa minwe mina pamwechete uye kumbomira usati wasimudza.
Chinja kubva kune imwe app uchienda pane imwe: neminwe mitatu isu tinofanirwa kutsvedza kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kana kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kuenda kune yakapfuura kana inotevera app, zvichiteerana.
Vhura iyo widget skrini: neminwe miviri tinotsvedza kubva kuruboshwe kuenda kurudyi.
Vhura yekutsvaga basa: kubva pachiratidziri chikuru tinofanirwa kutsvedza zvigunwe zviviri pasi.
Sekondari tinya: izvo isu zvataizonzwisisa se "kuruboshwe kurudyi" rwegonzo raizozadzikiswa nekudzvanya neminwe miviri. Iwe unogona zvakare kushandisa iyo Ctrl kiyi pane iyo keyboard uchidzvanya pane chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Zvese zviito zvaunogona kushandisa neTrackpad pane iyo iPad
Bhora Pass 3D, ichidzorerazve yakasarudzika kuti ipfuure iyo nguva